日本で、＋５年間、はたらく!! | ဂျပန်အလုပ်!
ပြဌာန်းလိုက်သော(အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား)နည်းဥပဒေသစ်အရ ဂျပန်အလုပ်အကိုင်များ လွယ်ကူစွာ ရရှိလာပါပြီ။
အချိန်ပိုင်းလုပ်သား ၊ သာမာန်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား များထက်ကို ရွှေမြန်မာများအတွက် အခွင့်အရေးတွေက ပြောမပြနိုင်အောင်အများကြီးရှိပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးများရရှိသော လစာစံနှုန်းထားအတိုင်း ရရှိနိုင်မည်။
ဟင်းလျာစီမံချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ ဧည့်ကြိုလုပ်ငန်း ၊ အရောင်းဆိုင်များစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဟော်တယ်လုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်ခွင့်အသစ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အကဲဖြတ်စာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT N4 အောင်မြင် ပြီးသူများကင်းလွတ်သည် ) အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
※特定技能評価試験と日本語試験（JLPT N4 の人は免除)に合格する必要があります。
ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကသာလျှင် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော၊ အားသာချက်များ
နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်များ နှင့် ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင် လမ်းညွှန်မိတ်ဆက်။
ဟင်းချက်၊ ဧည့်ကြို၊ အရောင်းဆိုင် ၊ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်များ လည်းဘဲ အစိုးရမှထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။
ဂျပန်လူမျိုးများရရှိသော လစာစံနှုန်းထားအတိုင်း ရရှိဖို့အာမခံပါတယ်!
တူညီသောလုပ်ငန်းအမျိုးစားမှာ အတူတကွအလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်လူမျိူးများနှင့် တန်းတူလစာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်းများနှင့်လည်း အတူတကွစိတ်ချယုံကြည်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်မှမန်နေဂျာနှင့် ၀န်ထမ်းများမှာလည်းမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ခြင်း၊မြန်မာလူမျိုးများ၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်သောကြောင့် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။
ရွှေမြန်မာတို့အတွက် ၀န်ထမ်းရေးရာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာ
လုပ်ငန်းကိစ္စသော်လည်းကောင်း ၊ လူနေမှုဘ၀မှာသော်လည်းကောင်း ၊ အဆင်မပြေမှုများ
အလုပ်ကိစ္စဖြစ်စေ ၊ နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀ဖြစ်စေ၊ အခက်အခဲများရှိလာပါက ၊ ရွှေမြန်မာတို့အတွက် (၀န်ထမ်းရေးရာအဖြေရှာ) ကို အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်လေ့လာ ဂျပန်စာ online ၀န်ဆောင်မူ စနစ်
ဂျပန်ဘာသာ/စကားကိုလည်း အွန်လိုင်းမှ တဆင့် အခမဲ့ လေ့လာဆည်းပူး နိုင်ပါတယ်။
– N3,N2 အထိဂျပန်စာကို ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။
– လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လက်ဆွဲစာအုပ်မှာလည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် စီစဉ်ထားသောကြောင့် အလုပ်ကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာ မှတ်မိနိုင်ခြင်း။
– ဂျပန်နှင့်ဆိုင်သော သတင်းနှင့်အချက်အလက်များအား လစဉ်မြန်မာဘာသာဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်း။
– ဂျပန်၌အလုပ်သက်တမ်း5နှစ်တာ ပြီးဆုံးပါက မြန်မာနိုင်ငံရှိချိတ်ဆက်ထားသောလုပ်ငန်းများ၌ အလုပ်ရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
မိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်ခ0ယန်း
သင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမည့် ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ကျခံမည် ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ထံမှ ၀န်ဆောင်ခပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
（စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက်လည်းTraining တက်ရောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။）
… …… …ဒီလို အခွင့်အရေးကောင်းတွေ စုစည်းထားတဲ့စနစ်တစ်ခုကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ ရွှေမြန်မာတို့အတွက်ယခုကအချိန်ကောင်းပါ။
အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စတွေက သင့်အားတွေဝေစေသလား?
– ဂျပန်မှာ ဆက်လက်အလုပ် လုပ်ချင်သော်လည်း မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို နားမလည်ခြင်း။ … …
– မည်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်ကို နားမလည်ခြင်း။ … …
– ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းအား မသိခြင်း။….. …
– လိမ်ညာ၊လှည့်ဖျားခိုင်းစေမှု မခံလိုခြင်း။ … …
– ဂျပန်၌ မိမိယုံကြည်စိတ်ချရသူ မရှိခြင်း။ ……
အထက်ဖော်ပြပါ အားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်၊ မြန်မာလူမျိုးများအား ကူညီချင်ရခြင်းအကြောင်း
မင်္ဂလာပါ။ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်က Golden Rock Group ၏ NARITA TATSUYA ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နှင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ရေစက်ကတော့ ဂျပန်၌ကျောင်းတက်ရန်လာခဲ့သော မြန်မာကျောင်းသား တစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ရာကစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်ကဂျပန်၌ စားသောက်ကုန်ထုတ် စက်ရုံ၊ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း စသဖြင့် လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်ငြားလည်း လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလားတူ အလုပ်သမားရှားပါးသည့်ပြဿနာကြောင့် ပူပင်သောကများခဲ့ရပြီး အိပ်ချိန်နည်းပါးခဲ့သည်အထိ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာပဲ မြန်မာလူငယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးက အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားအဖြစ် လုပ်ငန်းခွင်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ထိုကျောင်းသားမှ သတ်မှတ် အလုပ်ချိန်ကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးခဲ့ရုံသာမက အခြားသောထူးချွန် ကျောင်းသားအချို့ကိုပါ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူကအချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၊ စားသောက်ကုန်စက်ရုံနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းခွင်၌လည်း ဦး
ဆောင်၍ လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာကို ပံ့ပိုးသူအဖြစ်ကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုလူငယ်ပညာရေးပြီးဆုံးလို့ မြန်မာပြည်ပြန်တော့မယ့်အချိန်မှာ ကျွန်တော်က [ ငါတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့ မင်းအတွက် တို့ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တာများ မရှိဘူးလား] လို့မေးတဲ့အခါ [ မြန်မာလူမျိုး တွေကို ဂျပန်မှာ အလုပ် လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပါ ] လို့သူ့ဆန္ဒကိုဖွင့်ဟလာပါတယ်။ ထိုလူငယ်ရဲ့ စိတ်ကူးကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရန် 2013 ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ဘက်ကိုတိုးချဲ့ ပြီး လက်ရှိလုပ်ငန်းများကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
သူကဂျပန်တက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့ရပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ခါနီးအချိန်၊ ကျွန်တော်ဘက်က「ဂျပန်မှာ အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မင်းကျေးဇူးကို တုန့်ပြန်သောအားဖြင့် ငါ တို့ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တာများ မရှိဘူးလား」 လို့ မေးလိုက်တဲ့အခါ「မြန်မာလူမျိုးတွေကို မင်းတို့ဂျပန်မှာ အလုပ်ရအောင်တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးပါ」လို့ သူ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ထိုလူငယ်ရဲ့ စိတ်ကူးကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရန် ၂၀၀၃ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို စတင်ချေခြခဲ့ ပြီး လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုဆိုရင်ဂျပန်၌ အလုပ် လုပ်နိုင်သူလူဦးရေ လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်၊ အလုပ်သမား ရှားပါးမှုက ဂျပန်နိုင်ငံ၏အဆိုးရွားဆုံးပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဘက်မှာလည်း မြန်မာပြည်၌ လုံလောက်သောဝင်ငွေမရရှိသောမြန်မာလူငယ်အများစုက ဂျပန်နိုင်ငံ၌ သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန်ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဆက်အသွယ်တွေကို အားသာချက်အနေဖြင့် အသုံးချပြီး မြန်မာ့လူနေမှုဘ၀ တိုးတက်ရန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အလုပ်သမားရှားပါးမှု ခံစားနေရသော လုပ်ငန်းခွင်များကြား အပြန်အလှန်ကူညီနိုင်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် မြန်မာမှာတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ အဆက်အသွယ်များကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပြီး မြန်မာလူငယ်လူရွယ် တွေရဲ့ လူနေမှုဘ၀အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာဖို့ကို ရှေးရှုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အလုပ်သမားရှားပါးမှု ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရသော လုပ်ငန်းများအတွက် အကျိုးပြုမယ်လို့တွေးမိပါတယ်။
ကိုယျစားလှယျဒါရိုကျတာ NARITA TAtsuya
Golden Rock Group Co.,Ltd.
Establishment November 2013
Capital 230 million yen
Head office 〒631-0041
2-84,GakuenDaiwa-cho, Nara City
Employment placement office
247-7-3F,Kobou-cho, Saidaiji, Nara City
Yangon Office Bo Myat Htun Street,
10 ward,Botahtaung Township,
Naypyidaw Office Thapyaygone Ward,Zabyuthiri Township,
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ရရှိထားသော ပြည်ပအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ငန်းအကျိုးတူပူပေါင်းကာ ရန်ကုန်၌ ဂျပန်မှ တာဝန်ခံကို ထားရှိပြီး လုပ်ငန်းများရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီမှဦးစီးသောစာသင်ခန်းများနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများရှိ ဂျပန်စာသင်ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းသင်တန်းကျောင်းများ၊ ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းများ နှင့် ရှာဖွေမိတ်ဆက်ပေးခြင်း ၊ ထို့အပြင် ဂျပန်၌လုပ်သက်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း အလုပ်ရှာပေးခြင်း ၊ လူနေမှုဘ၀အဆင့်မြင့်တင်ပေးခြင်း၊ စသည့်ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ပေးနေပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ ၀န်ဆောင်မှုများသည် သာမာန်အားဖြင့် မြန်မာလူမျိုးများအား ဂျပန်အလုပ်ကို မိတ်ဆက်ပေးရုံသီးသန့် ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ပေးရုံသီးသန့်ဖြင့် ပြီး ဆုံးသွားမည်မဟုတ်ပါ။
မြန်မာလူမျိုးများ ဂျပန်၌လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်ချိန်မှစတင်၍၊ အမြဲမပြတ်ဆက်သွယ်ပြီး လုပ်ငန်းပိုင်း၌သော်လည်းကောင်း ၊ စားဝတ်နေရေး၌သော်လည်းကောင်း အဆင်မပြေမှုများရှိပါက အစစအရာရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၌ နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ အထူးအားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးခြင်း ၊ နေထိုင်မှုကာလသတ်မှတ်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သောပြဿနာများအား လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေးခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများလည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်တွင် အလုပ်ရရန် ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။
မိမိ၏အနာဂါတ်အားရည်မှန်းပြီး အခုချက်ခြင်းစတင်အကောင်ထည်ဖော်ရန် ပထမဆုံးခြေလှမ်းက အရေးကြီးပါတယ်။
ဂျပန်မှာ ၅ နှစ်တာ စိတ်ချလုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်လုပ်ချင်သူများ ယခုချက်ချင်း အောက်ပါပုံစံအတိုင်း အချက်အလက်များဖြည့်သွင်းကြရအောင်။
© 2019 GoldenRock Group Corp.